सरकारले छान्यो साढे ३ लाख गरिब !
सरकारले छान्यो साढे ३ लाख गरिब !	By नवीन सन्देश on	१३ भाद्र २०७३, सोमबार ०८:३७
काठमाडौँ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन लाख ५६ हजार ४१८ गरिबको पहिचान गरेको छ ।
मन्त्रालयले हिमाल, पहाड, र तराईका २५ जिल्लामा प्रारम्भिक चरणमा गरेको सर्वेक्षणमा गरिबलाई तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ। अति गरिबमा ५० प्रतिशत छन्, जो साझँ बिहान के खाने भन्ने समस्यामा छन् । गबिमा ३० प्रतिशत त्यस्ता छन्, जो दुख गरी जेनतेन हातमुखसम्म जोर्न सक्ने अवस्थामा छन् ।
त्यस्तैगरी गरिबीको सङ्घारमा २० प्रतिशत जनता टन्, जसको आर्थिक गतिविधिमा ध्यान नदिने हो भने अब छिट्टै गरिब बन्ने अवस्थामा रहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मानिसको आम्दानीको स्रोत, घरको अवस्था तथा खानपिनको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नातीयताको पहुँचजस्ता विषयलाई आधार बनाएर सर्वेक्षण गरिएको थियो । कर्णालीमा धेरै गरिब भेटिएका छन् ।
केहीका बारेमा उजुरुी परेकाले आगामी सओजसम्ममा गरिने दोस्रो चरणको सर्वेक्षणमा केही संख्या घट्न सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश प्रधानले जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिक
तपाइँकॊ प्रतिक्रिया : Related Posts ७ कार्तिक २०७३, आईतवार १०:२२ 0	गफमै समित चिनियाँ इन्धन
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १०:०३ 0	धरहरा पुनःनिर्माणको काम सुस्त
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १०:०१ 0	‘लोकमान’ मा अब ब्याक गियर चल्दैन: अोली
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १६:२५ 0
महाअभियोगको पक्षमा विद्यार्थीहरुको प्रदर्शन
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १५:४३ 0
आईएमई उपहार योजनाको तेस्रो र चौथो हप्ताको विजेता घोषणा
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १५:३९ 0
सीजीको दुई नयाँ मोडलका स्मार्टफोन बजारमा
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १४:५९ 0
टेलिकमलाई ‘फोर जी’ सेवा सञ्चालनको अनुमति
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १४:५१ 0
महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सांसदलाई ज्यान मार्ने धम्की
७ कार्तिक २०७३, आईतवार १३:२३ 0
नेको इन्स्योरेन्सका लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत बोनस शेयर
तस्वीर	नायीका विनीता बराल Read More
नायीका सुष्मा कार्की हट पोजमा Read More